Abasebenzi eNingizimu Afrika
Ithonya elinamandla kunawo wonke eBasotho LaseLesotho ukubandakanyeka kwabo njengabasebenzi eNingizimu Afrika yezimayini nemikhiqizo ekhiqizayo.
Lokhu kusho umthombo wabo oyinhloko wokuthola imali futhi uthinte imikhuba yabo. Imiphumela yaso iyabonakala emalungiselelweni abo asekhaya (amadoda ahlukaniswe isikhathi eside emindenini yabo), kanye nezinguquko endleleni umshado obhekwa ngayo (amadoda angabikho emholo-abatholayo kanye nabesifazane abasebenzisa abaqashi).
Ubuningi bomlobokazi bubonisa ilungelo lomuntu lokufuna ukwesekwa kubantwana babo uma bezuza, kunokuba nje bahlangane neqembu lesikhulu. Abadala kanye nabadwebi (lingaka) bahlangenwe nakho kwamadoda njengabafuduki bezisebenzi kanye nokuhlangenwe nakho kwabesifazane ekushiywe ekhaya.
Babizwa ukuthi bahlinzeke ukuvikeleka ezingozini ezibheke emayini nasezimbonini; kulindeleke ukuba basize ukuphulukisa ukulimala, ngokomzimba nangokomzwelo, okuhlobene nomsebenzi onjalo; futhi baphendukela ekucindezelekeni okubhekene nabesifazane abasala bodwa ukuze banakekele izingane, amasimu nemfuyo encane, uma ikhona, imali.